China 1390 CO2 Laser Engraver ho an'ny Acrylics, Lamba, Jeans, mpanamboatra hoditra ary mpamatsy |fara tampon'ny
1390 CO2 Laser Engraver ho an'ny Acrylics, Lamba, Jeans, hoditra
# Fizarana lakroa fanapahana miavaka, avo lenta, fahamarinan-toerana tsara, mahafa-po ny fitakian'ny ampahany mazava tsara.Marin-toerana ny fahombiazan'ny dinamika, afaka miasa mandritra ny fotoana maharitra.
# Mahay manapaka na tsy metaly na metaly, afaka manapaka vy tsy misy pentina, vy karbônina, acryl sy hazo, sns.
# Loha fanapahana laser miaraka amin'ny rafitra mifantoka amin'ny fiara.Ny lohan'ny fanapahana tamin'ny laser dia manitsy ho azy ny haavony eo amin'ny tampon'ny takelaka metaly, mba hahazoana antoka fa ny halavan'ny focal dia mitovy foana.Smooth cutting edge, tsy mila polishing na fikarakarana hafa.Azo tapahina amin'ny alalan'ity milina ity ny takelaka vy fisaka sy mionja.
Affordable tamin'ny laser mpanao sokitra azo ampiasaina amin'ny fanapahana, etching sy sokitra hoditra, lamba, lamba, taratasy, pataloha jeans, fibre sy ny fitaovana malefaka hafa.Ankehitriny ny mpanao sokitra laser mora amidy amin'ny vidiny mora.
Endri-javatra amin'ny laser engraver ho an'ny hoditra, lamba, Jeans, taratasy
1. Fiorenan'ny mekanika avo lenta sy matanjaka avo lenta amin'ny modely avo lenta izay afaka miantoka ny fihetsehan'ny angon-drakitra, ny hafainganam-pandeha avo lenta, ny fampandehanana maharitra tsy misy fanitsiana ary ny sary sokitra mitovy.Ny hevitra famolavolana manodidina ny vatana amin'ny alalan'ny dia afaka manampy fitaovana avy eo aloha sy aoriana izay ho an'ny workpiece tsy manam-petra.
2. Ny mpanao sokitra tamin'ny laser loha roa dia mampiasa rafitra fanaraha-maso nomerika DSP mandroso, famatsiana herinaratra laser fenitra iraisam-pirenena, fomba fiasa mitambatra, fitoniana avo lenta, famoahana interface tsara USB 2.0 avo lenta dia afaka manohana ny asa ivelan'ny zotra.
3. Mandefa rakitra mivantana avy amin'ny Coredraw, AutoCAD.
4. Fanatsarana ny famolavolana mekanika sy elektrika, feo ambany.
5. Hery lehibe sy ny fantsona laser stabilité avo, family nafarana sy fitaratra, ela velona.
6. Lalin'ny linear nafarana sy kasety avo lenta ho an'ny fifindrana, manamboatra rafitra haingam-pandeha, miantoka ny kalitao avo lenta sy ny fanapahana avo lenta.
7. Latabatra miakatra mandeha ho azy, fitaovana rotary, toerana misy teboka mena, Z axis ho an'ny safidy.
Fampiharana Laser Engraver ho an'ny Jeans, hoditra, lamba, taratasy
Fitaovana azo ampiharina:hoditra, lamba, lamba, lamba, fitaratra, fitaratra organika, acrylic, hazo, MDF, PVC, plywood, maple ravina, roa-loko birao, bamboo, plexiglass, taratasy, marbra, seramika, sns
Indostria azo ampiharina:Monument/Gravestone/Tombstone, indostrian'ny akanjo, indostrian'ny modely, modely amin'ny fanorenana, modely fiaramanidina sy fitetezana ary kilalao hazo, dokam-barotra, haingon-trano, zavakanto, asa tanana, elektronika sy kojakoja elektrika, sns.
Parametera ara-teknika amin'ny mpanao sokitra laser ho an'ny hoditra, taratasy, lamba, pataloha jeans
Faritra iasana 1300mm * 900mm
Laser Power 60W (80W, 100W, 130W, 150W raha azo atao)
Karazana laser CO2 fitaratra tamin'ny laser fantsona
Software mifanentana LaserWorks V8
Position System Teboka mena
Tohano ny endrika sary AI, PLT, BMP, DXF, sns.
Fomba mitondra fiara Stepper maotera
Fomba fampangatsiahana Ny fampangatsiahana rano mivezivezy
Venting Attachments Fantson-drivotra miaraka amin'ny fantson-drivotra
Voltage miasa AC 110-220V
5×10 Hypertherm Plasma Cutter ho an'ny Sheet Me...
CNC router 1325 habe 3D modely 2021 mpivarotra tsara indrindra
6090 Laser Fanapahana Garment Machine miaraka amin'ny Camera CCD
High Speed ​​​​3D Crystal Laser Engraving Machine f...